၎။ သင်သည် ပညာမတောက်တခေါက် (may be Ph.D) တတ်သောသူဖြစ်ရမည်။
၇။ ပြောရလျှင် သင့်အားကိုးပြီးလောကလိုအပ်မှုများ(အိမ်ထောင်ဘက်နှင့်Sex, မေတ္တာ)ကိုရယူနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်နေပါသည်။
ဘာသာတရားများတွင် သခင်ယေရှု၏ လမ်းပြမှု၊ လက်တွေ့ပြခဲ့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စွန့်လွှတ်အသေခံခြင်းစိတ်ဓါတ်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်မှုမှာ ကျွန်ုပ်အတွက် ထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားရှင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားကိုချစ်၊ လူကိုချစ် လာပြီးနောက်၊ ဘုရားရှင်မေတ္တာအောက်တွင်၊ ထာဝရအသက် ဆိုသည်ကိုရရှိပါသည်။ ချက်ခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။ ၀ိညာဉ်အသီး၉လုံး ဂလာတိ ၅း၂၂ ဆိုသည်မှာ ရော့၊အခုယူသွား မဟုတ်ပါ။ အချိန်ကာလတခုကို ပေးဆပ်ရပါသည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အထက်ပါ ဘ၀၏ အားနည်းချက်များသည် ပြည့်စုံလာပါသည်။ (၁)အလုပ်မဲ့တွေဝေဘ၀မှအလုပ်များလာမည် (၂)ရသည့်ငွေဖြင့်စားဝတ်နေရေးမပူမပင်ဘ၀ရောက်လာမည် (၃)အနာရောဂါကင်းမည်(သို့)အနာရောဂါရှိမှန်းတောင်သတိမထားမိသည့်လွတ်လပ်မှုကိုရမည် (၄)လောကပညာနည်းသော်လည်း၊ ဘုရားပေးသောဥာဏ်ပညာတိုးပွားလာမည် (၅)မလုပ်တတ်ကိုင်တတ်၊အဆင်မပြေလုပ်ကိုင်မှုများမှ မိမိနှင့်သင့်လျှော်စွာလုပ်နိုင်လာမည် (၆)စာမ၀င်၊အိပ်မပျော်မှုများမှ စားဝင်အိပ်ပျော်လာမည် (၇)အိမ်ထောင်ဘက်၊လိင်၊မေတ္တာတရာများလည်း ပြည့်ဝလာမည် .. ဤဘ၀အသက်ရှင်စဉ်တွင်ပင် ထာဝရအသက် ကိုရရှိပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် Free Thinker ဘ၀မှ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာသူဖြစ်ပါသည်။ အားနည်းချက်များရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် နံပါတ်(၆) စားဝင်၊ အိပ်ပျော်မှုကို ရရှိခြင်းမှာ အလွန်ကြီးမားသော ထာဝရအသက် ပင် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ ဖြည့်စွတ်ရေးသားရပါသည်။
If you respect religion but you Free Thinker (or) Atheist,
1. You must be Busy to do many things
2. You must be Reasonable income or saving $$ for eating, living
3. You must be Minimum sickness or healthy body
4. You must be Reasonable education knowledge (may be Ph.D)
5. You must be good for time management
6. You must be able to eat, sleep and independent person.
7. Lastly, you may be able to get good partner, sex, love in your present life.
I don't have above capabilities. I need help fromareligion.
For me, I can not live in this world without Jesus. He showed role model of LOVE, SCARIFIED ACTION and Finally "RESURRECTION". "Eternal life" is my way of life.
Faith to God give me Love God, Love Others. By God's Love, I will get Eternal Live. Not immediately. There isatime to get Spiritual Fruits Gal 5:22. During this time line, my weakness are slowly become stronger. (1) become busy from crazy thinking life (2) Get reasonable income for living (3) heal sick & disease (or) no pain feeling by my diseases (4) I don't have human education buy I get wisdom from God (5) My poor time management improved or get suitable job (6) Able to eat & sleep (7) lastly, my partner become understood to me, sex, love are blessed by God. That are Eternal Life which is received during I am alive.
I was grown from Free Thinker to Christ believer. My weakness are still have as human being but No.6 item, "I become able to eat, sleep is the best blessing of 'Eternal Life'. That is my short testimony. UZA
Posted by Witmone at 2:58 PM
Labels: ၀ိညာဉ်ရေး, သတင်း၊ဗဟုသုတ